Numeri 21 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
21 Zvino muKenani, mambo weAradhi,+ aigara muNegebhu,+ akanzwa kuti vaIsraeri vakanga vauya nenzira yokuAtarimu, uye akatanga kurwa nevaIsraeri, akatapa vamwe vavo. 2 Naizvozvo Israeri akapika kuna Jehovha, akati:+ “Chokwadi kana mukaisa vanhu ava muruoko rwangu, ndichaparadzawo chose maguta avo.”+ 3 Naizvozvo Jehovha akateerera inzwi raIsraeri akavapa vaKenani; uye vakavaparadza chose, ivo nemaguta avo. Nokudaro vakatumidza nzvimbo yacho kuti Homa.+ 4 Zvavakaramba vachifamba vachibva paGomo reHori+ vachienda nenzira yokuGungwa Dzvuku kuti vapoterere nyika yeEdhomu,+ mweya yevanhu yakatanga kuneta nokuda kwenzira yacho. 5 Vanhu vakaramba vachipopotera Mwari+ naMosesi,+ vachiti: “Makatibudisirei muIjipiti kuti tifire murenje?+ Nokuti hamuna chingwa uye hamuna mvura,+ mweya yedu yava kusema chingwa ichi chinosembura.”+ 6 Naizvozvo Jehovha akatuma nyoka dzine uturu+ pakati pevanhu, uye dzakaramba dzichiruma vanhu vacho, zvokuti vanhu vaIsraeri vazhinji vakafa.+ 7 Vanhu vakazouya kuna Mosesi, vakati: “Tatadza,+ nokuti tapopotera Jehovha uye imi. Tirevererei kuna Jehovha kuti abvise nyoka patiri.”+ Mosesi akareverera vanhu vacho.+ 8 Jehovha akabva ati kuna Mosesi: “Gadzira nyoka yakaita somoto uiise padanda rechiratidzo. Zvino kana munhu akarumwa, ngaabve aitarira, arambe ari mupenyu.”+ 9 Mosesi akabva agadzira nyoka yemhangura,+ akaiisa padanda rechiratidzo;+ zvino zvaiti kana nyoka ikange yaruma munhu, iye akatarira+ nyoka yemhangura, aibva aramba ari mupenyu.+ 10 Pashure paizvozvo vanakomana vaIsraeri vakatama, vakanodzika musasa kuObhoti.+ 11 Vakabva vatama paObhoti vakanodzika musasa kuIye-abharimu,+ murenje riri nechepakatarisana neMoabhi, nechokumabvazuva. 12 Vakatama ipapo vakanodzika musasa pedyo nomupata une rukova weZeredhi.+ 13 Vakatama ipapo vakanodzika musasa munzvimbo yeAnoni,+ iri murenje rinobvira pamuganhu wevaAmori; nokuti Anoni ndiwo waiva muganhu weMoabhi, pakati peMoabhi nevaAmori. 14 Ndokusaka mubhuku reHondo dzaJehovha zvichinzi: “Vhahebhu yaiva muSufa uye mipata ine hova yeAnoni, 15 nepanosangana mipata ine hova, pakarerekera kuchigaro cheAri+ uye pakasendamira kumuganhu weMoabhi.” 16 Vakabva ipapo vakaenda kuBheeri.+ Iri ndiro tsime rakanzi naJehovha kuna Mosesi: “Unganidza vanhu kuti ndivape mvura.”+ 17 Panguva iyoyo Israeri akaimba rwiyo urwu:+“Haiwa iwe tsime, tubuka! Riimbirei imi vanhu! 18 Tsime, rakacherwa nemachinda. Rakacherwa nevanokudzwa vevanhu,Nomudonzvo womutungamiriri,+ nemidonzvo yavo.” Vachibva murenje vakaenda kuMatana. 19 Vachibva kuMatana vakaenda kuNaharieri, uye vachibva kuNaharieri vakaenda kuBhamoti.+ 20 Vachibva kuBhamoti vakaenda kumupata uri munyika yeMoabhi,+ kumusoro kwePisga,+ uye kunobudikira kunzvimbo yakatarisana neJeshimoni.+ 21 Zvino Israeri akatuma nhume kuna Sihoni,+ mambo wevaAmori, achiti: 22 “Ndibvumireiwo kupfuura nomunyika yenyu. Hatizotsaukiri mumunda kana mumunda wemizambiringa. Hatizonwi mvura yomutsime. Tichafamba nomugwagwa wamambo kusvikira tapfuura munharaunda yenyu.”+ 23 Zvino Sihoni haana kubvumira Israeri kupfuura nomunharaunda yake,+ asi Sihoni akaunganidza vanhu vake vose, akaenda kunosangana naIsraeri murenje, akasvika kuJahazi,+ akatanga kurwa naIsraeri. 24 Israeri akamuuraya nomuromo webakatwa,+ akatora nyika yake+ kubvira kuAnoni+ kusvikira kuJabhoki,+ pedyo nevanakomana vaAmoni; nokuti Jazeri+ ndiro muganhu wevanakomana vaAmoni.+ 25 Naizvozvo Israeri akatora maguta aya ose, uye Israeri akatanga kugara mumaguta ose evaAmori,+ muHeshbhoni+ nomumataundi ose aiva pasi paro. 26 Nokuti Heshbhoni raiva guta raSihoni.+ Ndiye aiva mambo wevaAmori,+ uye ndiye akamborwa namambo weMoabhi, akatora nyika yake yose muruoko rwake kusvikira kuAnoni.+ 27 Ndokusaka vaitaura mashoko okunyomba vaizoti: “Uyai kuHeshbhoni.Guta raSihoni ngarivakwe uye rimiswe zvakasimba. 28 Nokuti moto wakabuda muHeshbhoni,+ murazvo wakabuda mutaundi raSihoni.Wakaparadza Ari+ reMoabhi, varidzi venzvimbo dzakakwirira dzeAnoni. 29 Une nhamo, iwe Moabhi! Muchaparara, haiwa imi vanhu vaKemoshi!+Achaita kuti vanakomana vake vave sevaya vakapukunyuka uye vanasikana vake vatapwe namambo wevaAmori, Sihoni. 30 Naizvozvo ngativapfurei.Heshbhoni richaparara kusvikira kuDibhoni,+Uye vakadzi kusvikira kuNofa, varume kusvikira kuMedhebha.”+ 31 Zvino Israeri akatanga kugara munyika yevaAmori.+ 32 Mosesi akabva atuma vamwe kunosora Jazeri.+ Naizvozvo vakatora mataundi aiva pasi paro, vakadzinga vaAmori vaiva imomo.+ 33 Pashure paizvozvo vakadzoka, vakaenda nenzira yokuBhashani.+ Ogi+ mambo weBhashani akauya kuzosangana navo, iye nevanhu vake vose, kuhondo yeEdrei.+ 34 Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Usamutya,+ nokuti ndichamuisa muruoko rwako, iye nevanhu vake vose nenyika yake;+ umuitire sezvawakaitira Sihoni, mambo wevaAmori aigara muHeshbhoni.”+ 35 Naizvozvo vakamuuraya iye nevanakomana vake nevanhu vake vose, kusvikira asisina kana akapona;+ uye vakatora nyika yake.+